Lunxury ပရိဘောဂအလှဆင်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက် XY-2414G ရွှေသတ္တုစပ် Panel ကို Shuolong
Lunxury ပရိဘောဂအလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက် XY-2414G ရွှေသတ္တုစပ် Panel ကို
အတိုင်အချင်း: 1.4mm × 3mm ×4×1.0mm× 10mm × 1
အလေးချိန် ၇.၈ kg / m2
ဖွင့်လှစ်သည့်နေရာ - ၄၅.၉%
ကွက်အထူ ၃.၀ မီလီမီတာ
အမြင့်အကျယ်: ၃ မီတာ
သတ္တုပြားများကိုပရိဘောဂအလှဆင်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးရှေးဟောင်းကြေးဝါသတ္တုကွက်အများစုကိုကက်ဘိနက်တံခါးတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သံမဏိအရောင်သတ္တုကွက်ကွက်များကိုစျေးဝယ်စင်တာများရှိဖိနပ်အိတ်များ၌ပိုမိုအသုံးပြုသည်။ အလင်းအိမ်များနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းများ၏တန်းနှင့်စတိုးဆိုင်၏ခြုံငုံစတိုင်ကိုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
ထို့အပြင်သင်၏လက်ရှိသို့မဟုတ်လာမည့်စီမံကိန်းများအတွက်သတ္တုပြားဒီဇိုင်းဒြပ်စင်များထည့်ရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများအပြင်သင်၏စီမံကိန်းများအတွက်စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
၁) စက္ကူဖြင့်ထုပ်ပိုးသည့်တစ်ခုချင်းစီ၊ သစ်သားသေတ္တာတစ်ခုတွင် ၁-၅ ကောင်၊
၁.၄၀ နှစ်အတွေ့အကြုံ ။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ဝါယာကြိုးကွက်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ။
2. အရည်အသွေး Garanteeဖြေ။
၃။ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝါယာကြိုးကွက်ဖြေရှင်းချက် & ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုနိုင်ဘူး
သငျသညျမှာယူသို့မဟုတ်ငါတို့သတ္တုကွက်၏အပိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိလိုလျှင်, pls ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုယူကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်သို့သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုပေးပို့လျှင်, 24 နာရီအတွင်းသင်ပြန်ကြားလိမ့်မည်!
ရှေ့သို့ XY-2414P သံမဏိပြားချပ်ချပ်ဝါယာကြိုးပြားမျက်နှာပြင်
နောက်တစ်ခု: ပရိဘောဂများအတွက် XY-2027GO အလှဆင်ဝါယာကြိုးကွက်
XY-D2 သံမဏိကိုယ်ထည် ၂ ခုကြိုး ...
XY-2414P သံမဏိပြားချည်မျှင်ကြိုး ...
ကက်ဘိနက်များအတွက် XY-D2 ရှေးဟောင်းကြေးသတ္တုကွက်